कोरोना बीमा गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? यी तथ्यहरु थाहा पाइराखौँ « Kakharaa
कोरोना बीमा गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? यी तथ्यहरु थाहा पाइराखौँ
१७ भदौ, काठमाडौं । बीमा समितिले वैशाख ७ गतेदेखि औपचारिक रुपमा कोभिड–१९ सम्बन्धी बीमालेख जारी गर्‍यो। त्यसको करिब एक महिनापछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै एक लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा सरकारले गरिदिने घोषणा गरे।
नेपालमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको २० प्रतिशत दायित्व हुने गरी बीमा पुल मार्फत पोलिसी सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।